A.R AAPARTMENTS (I-STUDIO APARTMENT) - I-Airbnb
A.R AAPARTMENTS (I-STUDIO APARTMENT)
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguSudeep
Ungarhoxa simahla ngaphambi kwe-29 Jul.
I-appartment yindawo epholileyo kunye nembono yeenduli zeRanka. Uyakwazi ukubona iiparaglider zihamba kwaye zibhabha xa ujonge ngefestile. unokufikelela kuwo wonke umgangatho kunye ne-terrace. umbono uthandeka
Le ndlu ikumgangatho we-4 kwaye inokufikelela okukodwa kwithafa elibonelela ngembono entle yokutshona kwelanga phezu kweenduli zeRanka. Isibonelelo sokulala kwintente yokumisa kwi-terrace iyafumaneka.
Kuba imi malunga nesiqingatha sekhilomitha ukusuka kwisithuthi sesibhedlele saseStnm sifumaneka lula. kukho iindawo zokutyela ezilungileyo kunye neevenkile zegrosari ngeenxa zonke. Kwabo bathanda iziselo zabo ivenkile ethengisa utywala ikufuphi nje. Zonke iindawo zomdla wokhenketho zifikeleleka ngokulula ukusuka kwindawo.
Umbuki zindwendwe ngu- Sudeep
Andihlali kwi apartment kodwa ndifumaneka nanini na nge phone or WhatsApp